Astaamo bilaash ah oo loogu talagalay naqshadeeyayaasha qaabeynta qaab dhismeedka: | Abuurista khadka tooska ah
In kasta oo aan ka heli karno noocyo badan oo xirmooyinka astaanta bilaashka ah shabakadda, waxay umuuqataa in markaan eegno mid ballaaran, tayo iyo casri ah hawshu way sii adkaaneysaa. Midka aan maanta kuu keenayno ma aha oo keliya xirmo ka badan 300 icons laakiin kuwani waxay leeyihiin a qalabka dhagaxa ah naqshadeynta, kala duwanaansho weyn iyo noocyo kala duwan oo noocyo kala duwan ah.
Noocyadeeda kaladuwan ee kaladuwan ayaa u oggolaanaya iyaga in loo isticmaalo khadka iyo khadka labadaba waana si fudud wax looga beddeli karo, tani waxay noo oggolaanaysaa inaan si fiican ugu habboonaanno shaqooyinkeenna kala duwan.
Marka taa laga reebo waxaan leenahay khadkooda qaabeynta qaab ah "Calaamadda Flat" Markaa maanta la isticmaalo, astaamaha oo dhan ayaa aad looga taxaddaraa noocyadooda kala duwan taas oo ka dhigaysa naqshadaheenna mid dhalaalaya oo midab badan. Wax ku biirintan waxay ku imaaneysaa xirmo sumadeed leh noocyo badan oo kala duwan oo xitaa u oggolaaneysa iyaga in si toos ah loogu meeleeyo degelkeenna iyada oo aan la soo degsan.
Xagee lagala soo bixi karaa astaamaha:
Si aad u awoodo inaad adeegsato waad kala soo dagsan kartaa GitHub meesha ay tahay inaad gujiso badhanka "Midab ama Soo Degso" cagaaran, halkaasna waxaad ku haysataa ikhtiyaar aad ku soo dejiso gudaha .ZIP.
Farqiga u dhexeeya astaamaha noocan ah iyo kuwa caadiga ah waa taas kuwani waxaa soo saaray CSS ama SVG dhammaan faahfaahintana waa la tafatiri karaa astaan ​​kasta, oo kuu oggolaaneysa inaad wax ka beddesho khadadka, midabada, rogrogto ama aad cabirto mid ka mid ah walxaha ka kooban. Maskaxda ku hay in astaamaha noocan ah ay u fiicnaan karaan noocyada mashaariicda qaarkood, halka mashaariicda kale kuwii ku jiray qaabka ay tahay in loo isticmaalo. .PNG.
Un xirmo icon aad u wanaagsan taas oo u oggolaanaysa dhammaan noocyada isticmaaleyaasha, labadaba kuwa horeba khibradda ugu leh astaamaha iyo wax ka beddeliddooda iyo kuwa aan lahayn, ku beddela hab macquul ah oo fudud.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Astaamaha » Astaamo bilaash ah oo loogu talagalay naqshadeeyayaasha qaabka qaabeynta qaabdhismeedka:
Evan Hecox iyo "Howlgalka Dugsiga"
Farshaxanyahankan Ruushka ah wuxuu abuuraa farshaxanno xayawaanno cajiib ah leh dhoobo jilicsan